Baqhankqalazele ukhuseleko kulwaphulo-mthetho abahlali basezilokishini – Elitsha
11th September 2018 Mzi VelapiCape Town, Iyavela, Uncategorised 0 Xhosa
Abahlali bafuna ukuba izixhobo zolwaphulo-mthetho zijoliswe kwindawo ezinolwaphulo-mthetho oluphezulu. Umfanekiso ngu Mfundo Mhlanganiso.
Abahlali baseKapa abaphuma kwilokishi bekhokelwa ngumbutho olwelwa amalungelo woluntu i Social Justice Coalition (SJC) iye yabamba uqhankqalazo ngaphandle kwamasango ePalamente. Lombutho ubuqhankqalazela ukukhutshwa kwamajoni ezilokishini, unyanzelisa amapolisa ukuba abeke iliso umba wendawo zentselo ezingekho mthethweni, ukwabiwa kwezixhobo zokwenza umsebenzi ngokulingana, ukukhutshwa kwengxelo -manani qho ngesiqingatha nendlela yokusebenza kwamapolisa kwindawo zogobityholo.
Oku bekusenzeka ngelixa umphathiswa wamapolisa uBheki Cele ebekhupha ingxelo-manani zolwaphulo-mthetho yaminyaka le.
Ngexesha ethetha nentatheli osuka kwi SJC u Mandisa Dyantyi uthe kudala bequqa bebuyelela ePalamente benyanzelisa ukuba ingxelo-manani zikhutshwe qho ngesiqingatha sonyaka nanjengoko iPalamente yayifuna njalo.
Ngokuka Dyantyi into yokuba ingxelo-manani zolwaphulo-mthetho ziphume ngonyaka endaweni yokuba ziphume ngesiqingatha ithetha ukuba amapolisa awana bucwepheshe bokulwa ulwaphulo-mthetho. ” Lento yokuba ingxelo yolwaphulo mthetho iphuma emva konyaka endaweni yesiqingatha isixelela ukuba indlela amapolisa asebenza ngayo ayisekelwanga kubukrelekrele, kubungqina nase kuqinisekiseni ukuba ukwabiwa kwezixhobo zokulwa ulwaphulo-mthetho,” utshilo oka Dyantyi.
” Ukuba ujonga amanani-ngxelo phakathi kwesikhululo samapolisa e Claremont uwathelekisa nalawo aseNyanga ibe iNyanga iyindawo enamanani aphezulu wokubulawa kwabantu nendlela izixhobo ezabiwa ngawo ungabona ukuba iNyanga yeyona ndawo ifuna izixhobo namapolisa amaninzi kuneClaremont,” ucacise watsho oka Dyantyi.
Ikomishoni yokujonga indlela amapolisa asebenza ngayo eKhayelitsha yaye yaphakamisa ukuba ninzi kwendawo zentselo ezingekho mthethweni . ” Ngokokwazi kwethu izikhululo zamapolisa azinalwazi ukuba zingaphi kwingingqi nganye indawo zentselo ezingekho mthethweni, kwaye abazazi ezinempepha nezingenazo,” woleke ngelitshoyo lo ongusekela nobhala we SJC.
Ngexesha enikezela ngexwebhu ku Khomishina kazwe-lonke wamapolisa uKhehla Sitole nalowo ongumcebisi kumphathiswa u Lennit Max, unobhala we SJC uAxolile Notywala uthe akathethanga nyani umphathiswa uBheki Cele xa ebesithi ulwaphulo-mthetho ngakubantu basetyhini luzakubekwa phambili. ” Anithethanga nyani nomphathiswa kuba kaloku ukuba bekunjalo ngeningakhange nilwe nathi ngexesha silwela ukwabiwa kwezixhobo zokulwa ulwaphulo-mthetho,” utshilo loka Notywala.
Also read: Imibutho yoluntu ixelele ijaji yokhetshe ngamakakwenze
” Ubomi babantu abamnyama abangathathi ntweni abubalulekanga. Ukukhusela indawo yeyona nto ihoyiweyo kunoku khusela ubomi babantu abangathathi ntweni. Amapolisa afuneka kakhulu kwindawo ezifana neNyanga, Umlazi njalo-njalo. Asithi amapolisa mawavale indawo zentselo kuba siyayazi ukuba abantu baphila ngokushishina ngotywala,” ucacise ngelitshoyo oka Notywala.
” Amapolisa ngakowonke-wonke kwaye ubomi bomntu wonke bubalulekile,” utshilo u Lennit Max ephikisa into ethethwe nguNotywala yokungabekwa phambili kwabona bangamaxhoba olwaphulo-mthetho.
Ngokwengxelo yamanani-ngxelo kwizikhululo zamapolisa kuzwelonke ezilishumi ezihamba phambili ngokuxelwa kokubulawa ezisixhenxe kwezo zilishumi zikwisiXeko seKapa. Isikhululo saseNyanga sisahamba phambili ngamakhulu amathathu anesibhozo.
Ingxelo-manani zolwaphulo mthetho
Bahlala ngoloyiko abahlali baseMarikana
Ugxininise ukumisa ulwazi nengxoxo phambili uTembeka Ngcukaitobi